Bọọlụ Bontrager ọ dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Bontrager wiil nyocha - otu esi edozi
Bontrager wiil nyocha - otu esi edozi
Bọọlụ Bontrager ọ dị mma?
Ogweabụwo onye na-egwu ogologo oge na eriri carbon asọmpiwiilahịa, na Aeolus Pro 3 TLR yawiilbụ nhọrọ siri ike gbara ọkpụrụkpụ nke nwere njikọta na-enweghị nke tube,ezibraking arụmọrụ, pụrụ ịdabere na anwụ ngwa ngwa na ọsọ n'ụba. Ha na-ele anyaezi, kwa, jiri akara ngosi di omimi.Ọkt 11 2018
Ga-ahụ n'anya na-eweta mpempe akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ na igwe kwụ otu ebe gị. Na taa anyi nwere obi uto n'ihi na Bontrager gwara anyi ka anyi mee Aeolus XXX nke ohuru, nke ha na-ekwu na ha di mfe ile anya ma gbago, ihe ndi ozo di ike karia ndi mbu - ee, na ebe ka nma ighapu karia mebiri emebi yaadị na Flanders na Belgium? (egwu kọmputa R&B) Egwuregwu wheel Aeolus anọwo na nwa oge ugbu a, weghachite azụ na 2011. Mana Bontrager weputara ugbua usoro ohuru ohuru, afọ atọ na mmepe yana mmezigharị zuru oke - ee, na enwere ụdị atọ na usoro ohuru a.
Ya mere, anyị nwere XXX 2s, XXX 4s na XXX 6s na omimi nke 28 millimeters, 47 na 60 millimeters. Modelsdị ndị a niile dị ka nsụgharị breeki na nsụgharị breeki breeki yana nke ọma na nke taya na nke tubular. Na clincher version bụ tubeless dakọtara.
Taa, Matt na-eyi xxx 6s n’ebe ahụ na Orbea ya, ma ọ bụghị na enwere m ihe nnabata XXX 2s na Trek Emonda m. Site na nhazigharị, Bontrager esetịpụrụ onwe ya ihe mgbaru ọsọ nke arụmọrụ aerodynamic Na-emezigharị wiil ndị a ma e jiri ya tụnyere nke Aeolus gara aga ma n'otu oge ahụ na-eme ka ha dịkwuo mfe, isi ihe abụọ dị na elu. Ma nnukwu ihe m bụ ego ha mere ka igwe kwụ otu ebe a kwụsie ike na ọnọdụ ikuku. - Bontrager kwuru na n'ime ule ha gbara ọsọ, ọhụụ ọhụụ a na-eme nke ọma karịa asọmpi maka omimi miri emi na ihe atọ ahụ Matt na-ekwu maka ya.
Dịkwa ka Matt ka kpọkwara aha, nkwụsi ike na-abụ n'ezie nnukwu ihe. O nweghi ihe o mere etu ikuku gị si arụ ọrụ, ọ gaghị arụ gị ọfụma ka ị gbapuo igwe kwụ otu ebe ma nọdụ ala na okporo ụzọ dị n'akụkụ okporo ụzọ. Ugbu a oke omimi nke ụkwụ azụ anaghị eme nnukwu mgbanwe na nkwụsi ike na-agafe agafe, yabụ m ka nwere ike iji rim dị omimi ma ọ bụ ọbụlagodi diski iji nwalee ya n'enweghị nchekasị.Ma ebe a, ebe ị nwekwara ike ịchọta nduzi gị, nke ahụ bụ akụkọ dị iche.
Emechaa (Egwú kọmputa R&B) - Ọ bụrụ na ị dị mma ugbu a, Dan, ka anyị bido jiri nlezianya leba anya na wiil m. Anyi, achoro m anya nke igwe ugbo ala, mana ha nwere ike inuta ihe osise site n’oge ruo n’oge na windier.
Ihe niile ọ na - ewe bụ otu nnukwu ikuku nke ikuku iji bulie ntụkwasị obi gị obi, anyị niile anọkwala ebe ahụ - ọ bụ ya mere Bontrager ji tinye uche na ịkwalite nkwụsi ike nke ngwaahịa ọhụrụ ha. Ha zipụrụ ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala n'okporo ụzọ na ụbọchị ụbọchị ikuku na-arịọ ha ka ha dee otu oge kpọmkwem mgbe ha chere na ha akwụghị chịm n'ihi oke ikuku. Site na nke a, ha nwere ike ịkọwapụta ọnọdụ ikuku kpọmkwem nke na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala nwee ụjọ ma mezie ọnọdụ ndị ahụ maka ule ọwara ifufe ha.
Ha na-ekwukwa na eriri igwe ọhụrụ a pụta nsonaazụ ule a, ahụmịhe na-erughị ala akụkụ f karịa ikuku ha karịa ndị isi ha. Iji nweta ebe a, Bontrager bu ụzọ nwalee ụzọ dị ịtụnanya 10,000 dị iche iche na ngwanrọ kọmputa. Mgbe ahụ ha nwetara ụdị kachasị mma ma mee ọtụtụ ụdị ha ma tinye ha n'ime oghere ifufe iji mechaa nweta ụdị kachasị mma, nke kachasị mma na ikuku, ike na nkwụsi ike maka nke ọ bụla n'ime omimi mmiri atọ ị na-ahụ ebe a taa na-enye na crosswinds. - N’akụkọ ihe mere eme, otu ihe ọghọm dị na rimbọn emeela ka ha nwee ike ịrụ ọrụ n’ime mmiri.
Ugbu a, nke m, ụjọ na-atụkarị m, n'etiti ikpo, n'ime mmiri, n'ihi na amaara m oge ole ọ dị n'etiti ịdọta lever ahụ na n'ezie braking. Ya mere, Bontrager tinyere oge na ike iji dozie nsogbu a. The braking elu ndị a nwere laser akara uzo.
N'ụzọ bụ isi, ha jiri laser rụọ ụdị ụfọdụ ụdị n'elu ala ahụ, ọ ga-abụrịrị nnukwu nzọụkwụ na-aga n'ihu na arụmọrụ nke arụmọrụ carbon. (egwu kọmputa ike) - Achọghị m ịma taa, Matt, n'ihi na m na-eji brek diski. Ugbu a, dịka m kwuru, anọ m na slimmest nke ụdị ọhụrụ ha taa, XXX 2s.
Naanị ha na-atụle gram 1305 maka ụdị breeki rim, ma ọ bụ gram 1380 maka nke a. Mara mma, m chere na ị ga-ekweta na m. You nwere ike tufuo gram 150 ọzọ site na igwe ndị a ma ọ bụrụ na ịhọrọ ụdị tubular.
Ọ bụ ezie na ha dị ntakịrị, ha dị oke obosara dị ka rim. Oghere dị n'ime ya bụ 21 millimeters, ya mere kachasị maka taya taa taa site na 25 ruo 28. Bontrager na-atụ aro ma ọ dịkarịa ala taya 23 mil, ma n'eziokwu n'eziokwu, enweghị m ike ịghọta ihe mere ị chọrọ iji sie ike taa - ebe ọ bụ na Matt abụghị ' t n'ezie banyere ibu nke wiil ya ekwuola, echere m na m ga-eme nke ahụ maka ya.
Ọbụna na 60 millimeters miri, wiil ya na-abịa naanị na 1530 gram - ma naanị n'ihi na m na-eto nke ọma, nke ahụ apụtaghị na ha abụghị ikuku. N'ezie, na nyocha nke ikuku ha duziri, Bontrager chọpụtara na ụdị a dị ka aerodynamic na ngwa ngwa dị ka rim nke ụfọdụ n'ime ndị isi asọmpi ya, nke bụ 50% miri emi n'ihi na ha dị larịị ọ pụtara na ịgafe n'ezie adịghị okwu na igwe kwụ otu ebe a. Echeghị m na naanị maka na ha anaghị enwu enwu apụtaghị na edozighi ha ka ha sie ike, ọ bụghị naanị maka okporo ụzọ ma ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ị họrọ, ma ọ bụ karịa okwute anyị gbapụrụ na Flanders taa
Onweghikwa ikike obula diri onye na-agba ya. Ugbu a, ka anyị lebakwuo anya na rim n'onwe ya. DT Switzerland wetara spokes.
Ugbu a 24 Aerolite spokes n'ihu na azụ. Na rim brek version nke wiil ndị a, agbanyeghị, enwere 16 n'ihu. Na nke ahụ bụ otu ọnụ ọgụgụ nke spokes gafee niile atọ ụdị.
Ma na etiti, na hub, shells ndị a sitere na Bontrager n'onwe ya, mana n'ime nke ọzọ DT Switzerland na-enye ya. You makwa na mgbe ị nụrụ aha ahụ, ọ ga-abụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi. (egwu kọmputa R&B) - Nke atọ wiilị bụ Aeolus XXX 4s.
ugboro ole ka I kwesiri iri nri
Ha nọ ọdụ n'etiti wiil m na Dan gbara ịnyịnya taa wee kwuo na ha bụ gburugburu ha niile, ya mere, ọ dị mma na egwu na ọnọdụ niile - ee, dị ka anyị XXX 2s gosipụtara ule Bontrager, na ndị a bụ ihe omimi na par na ụfọdụ ihe miri emi nke ndị asọmpi ha. Ya mere, ị nwere uru nke ịga ọsọ ọsọ dịka ị naghị enwe ụjọ na ọnọdụ gusty. N'ezie, enwere ike ịba uru abụọ, ọ nwere ike ọ gaghị abụ n'ihi na ị ka nwere ike iji ihe ndị a ebe ndị asọmpi gị na-erute ọtụtụ rim ka ọ dị mma.Ma tupu anyị emechaa, Dan, ọ bara uru ịmara na wiil nke rim a dị na Trek HQ e mere ma arụpụta ya na Waterloo, Wisconsin, nke mara mma ọ bụghị ya? N'ezie agwụbeghị n'ihi na anyị chefuru ihe.
M ka chetara - Kedu? A ime biya? - Ee e, nnwale nnwale freewheel. - Kedu ihe ọ bụ? - Anyị na-anwale ụda nke freewheel. - Oh, nri. - M pụtara, ndị mmadụ na-ewere iwe na ihe ndị a na-ekwu ma ọ bụrụ na ị chefuo ya. - Anyị kwesịrị ịka mma mgbe ahụ anyị - mee igwe okwu ebe a.
Ị dịla njikere? - Ka anyị gee ntị ntakịrị - Lezie mkpịsị aka gị - Ọ dị mma - Nke ahụ anaghị ada oke ụda, ọ bụ? - Inweghị ike iji ikuku a anụ ihe. - Mba, nke ahụ ọ dị mma ka ọ bụ ihe ọjọọ? - Amaghị m n’ezie. Eji m n'aka na ndị na-ekiri anyị ga-eme ka anyị mata na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a. - Ee ha ga-. - Ọ dị mma, mma, ọ bụrụ na ị nwee mmasị na edemede a, ị nwere ike inye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ, n'okpuru.
O doro anya na, n'afọ a Team Trek-Segefredo ga-eji ụdị nsụgharị tubular ndị a maka agbụrụ nke Flanders na Paris-Roubaix agbụrụ ebe ahụ, naanị ebe a.
Ndi Bontrager rim akpachaghi anya?
Ogweahọrọla iji bekee risịrị kamankoatụmatụ ndị ọrụ ENVE na Zipp nwere dị ọhụrụ ha rụpụtarawiil.Hookless rimejirila igwe kwụ otu ebewiilruo oge ụfọdụ.Sep 4 2020
Onye Nkọwa: Ndị a bụ ndị ọhụụ Zipp 303S ọhụrụ dị ọnụ ala, na-adị ọkụ karịa, ma o doro anya na ọ ọsọ ọsọ karịa wiil 302 ha na-edochi. Nke ahụ adịghị ka ọ ga-emere ha ikpe ziri ezi, ebe Zipp na-ekwu na ha emeela ka arụmọrụ zuru oke nke wiil a ka mma ruo na ebe arụmọrụ ahụ gosipụtara karịa 303Firecrest a ma ama, nke dara ahịa azụ na 2016 ma na-efu okpukpu abụọ. N'eziokwu, achọrọ m ka ị mata ka Zipp si mee ya, yabụ ka m jupụta gị.
Nke mbu, ee, a ka m n’ulom, ma di itunanya, enwetara m aka n’oru ohuru ohuru. Ọtụtụ ekele nye Zipp maka izipu m yana maka iji ndidi zaa ajụjụ m niile ka m wee nye gị nkọwa kemmiri ihe na 808 na diski. Otutu omimi nwere ụdị na ọnụahịa dị iche iche.
Enwere m Firecres t, zipụ kpochapụwo nwere akara ngosi ya ejiri wee megbuo ma na ụzọ. NSW na-eme ka arụmọrụ dịkwuo elu, ma ị nwere 302, nke mere ka ihe niile gbasara carbon na ihe ọmụma dị nro ma mee ka ọ ghọọ ihe dị ọnụ ala. Ugbu a anyị nwere ọbụna dị ọnụ ala karịa, Mkpa ọkụ, na ngwa ngwa 303 S.
O doro anya, nwee obi ụtọ na-aga n'okporo ụzọ, yana yana tubeless dị njikere. Yabụ kedu nke na-eme? Maka ọtụtụ akụkụ, ha nwetara akara ọhụụ, maka mmalite. Ka anyị buru ụzọ kwuo maka ihe ndị a ruuru ha, ọ bụ ya? Zipp kwuru na 303 S a bụ 10 watts karịa arụmọrụ karịa ihe ha bụ 2016 303 Firecrest dị na 40 km / h.
N'ịhapụ otu oge na ndị a dị ngwa karịa ụmụnne ha ndị dị oke ọnụ karị, echere m na ọ dịkwa ezigbo mkpa ma na-atọ ụtọ ịmara na Zipp na-agbanwe ngwa ngwa etu a gụkọtara ya, nke ahụ bụ n'ihi na Zipp kwuru na ha sitere n'okporo ụzọ ifufe gaa n'ụzọ zuru oke. anwale na-abụghị nanị na-agụnye aerodynamics, kamakwa taya, Ọnọdụ kwa. Usoro nnweta data ya dị elu nke na ị nwere ike nweta ezigbo nsonaazụ na mpụga n'èzí site na mkpanaka ikuku nke na-atụle ifufe na data ikuku na oge. Ndị injinia Zipp nwere iji ọtụtụ awa nọọ n'okporo ụzọ na 40 km / h.
Kedu ka ndị a si akwagide n'okporo ụzọ ifufe? Amaghị m. Zipp na-ekwu na ha abụghịkwa ọsịsọ ahụ, ma kama ọ na-arụtụ aka na ọ bụ data ha dị adị n'ezie na-egosi na ha dị 10 watts karịa karịa na 40 km / h n'okporo ụzọ na-amị amị, n'ihi na n'elu ebe siri ike nke ọdịiche ahụ na-abawanye ọbụna Ọzọkwa. Kedu? Zipp haziri ihe ndị a ka ha wee bụrụ nke kachasị mma maka taya 28 milimita n'obosara.
Nke ahụ bụ akụkụ buru ibu n'ezie na mmụba a na arụmọrụ zuru oke n'ihi na taya zuru oke na-agagharị na obere nguzogide yana enwere ike ịchụpụ ya na nrụgide dị ala, nke na-emekwa ka arụmọrụ na-agagharị. Ndị na-ekiri ya ga-achọpụta na ọ bụ obere ọdịiche dị ka ọ dị n'etiti na mpụga, na ee, ị ziri ezi n'ihi na ndị a enweghị nko. Ihe mkpuchi ọdịnala nwere obere nko n'elu nke akụkụ rim n'akụkụ ahụ, mana na ihe kachasị ọhụrụ na teknụzụ taya, ị chọkwaghị nke ahụ.
Nwere ike tufuo ya ma nweta ọtụtụ uru site na ya. Otu n'ime ha bụ ikuku. Hookless pụtara ntụgharị dị nro dị nro site na taya gaa na rim nke na-emepụta obere ọgba aghara karịa ka ị gafere ikuku.
Ebe ọ bụ na obosara nke dị n'ime nwere ike ịdị obosara, taya ahụ na-ada obere karịa na rim, nke na-emekwa ka ọgba aghara dị ntakịrị. Ihe ndi ozo nke rim profaịlụ agbanwewokwa dika o dikwa, ochie 302, millimita iri anọ na ise, ma rim di obere n ’imi karie nke ndi Zipp. Kedu maka ibu mgbe ahụ? Ha dị gram 165 karịa 302 bịara n’ihu ha, nke pụtara na ha bụ naanị 1,530 sentimita asatọ na mkpokọta maka akpa azu.
Nke ahụ bụ 710 n’ihu na 820 na azụ. N'eziokwu, nke ahụ abụghị nzuzu, nzuzu nzuzu, mana maka igwe kwụ otu ebe omimi a, ike, na ọnụahịa, m ga-asị na ọ na-aga nke ọma. Kedu ka ị mere? Kacha ọkụ mgbe ahụ? Zipp kwuru na ịkwalite usoro ihe owuwu, imepụta ebu, na ịtọgbọ carbon enyela ha ohere ịrụ ọrụ nke ọma na obere ihe.
Otu n'ime nnukwu nzọụkwụ n'ihu bụ, ihe ijuanya, ihe ijuanya, ịga na-enweghị nko; ị nwere ike ịgbanwe ụzọ ha si emebe ntọala rim. Na-agbanwe site na mandrel dị nro gaa ọdịdị ọla nke na-enye ohere ka ị nwekwuo ike mkpakọ. Nwere ike iji obere resin na obere carbon rụọ ọrụ n'akụkụ a nke rim.
Ọ bụrụ na ike bụ nchegbu gị, ịkwesighi ịdị. Echere m na ọ bụ ihe ziri ezi ịsị na Zipp nọ na-ajụ ihe ize ndụ mgbe ọ bụla n'ihe metụtara iwu Na nyocha nnwale ha siri ike dị ka ndị bu ha ụzọ, mana ndị a ugbu a nwere mmetụta ndụ na mbibi ọ bụla nke mebiri emebi niile na-akwọ ụgbọala. Kedu ka ị mere? Ndị a, bụ ndị mbụ carbon Zipp wiil a ga-eme na mpụga nke U.S.
SRAM, ụlọ ọrụ nne na nna nke Zipps, nwere ụlọ ọrụ carbon na-arụ ọrụ na Taiwan ma ọ mepụtaghachila ngwa ngwa nke Zipp Indianapolis Process gafee ebe ahụ, mana Zipp kwukwara na site na ime mgbanwe ndị a na usoro ụlọ ahụ, dịka nko, ha nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Ha na-ekwukwa na ebe ọ bụ na ha dị mfe, enwere obere ngwa ọrụ ebe a. You naghị anụkarị ndị na-emepụta ihe na-ekwu na ihe dị ọnụ ala karịa n'ihi na ọ dị mfe, mana elu-ise na gburugburu.
Ọ na-ewe oge ịlaghachi na nke a mana ọ dị ka ọtụtụ ihe dị jụụ emeela mana otu n'ime ọdịiche doro anya sitere na wiil ọhụrụ ahụ bụ akwụkwọ mmado ọhụrụ. Akara Zipp mara mma gbanwere site na nke a gaa na nke a. Ndị na-anụ ugo Eagle ga-achọpụta nke a ọ bụghị naanị na wiilị igwe kwụ otu ebe a malitere n'afọ gara aga, kamakwa na wiil ndị otu Movistar ji mee ihe n'afọ a.
Isi okwu abuo abuo kwesiri ikwuputa na mbu ha gha ekwu na ha nwere axle na freehub dika ndi eji agba oku na Firecrest na nso nso a. Ihe ndị a na-eji ọnụ J-gbagọrọ agbagọ, ebe Firecrest na-eji nkwuputa agbatị. N'ikpeazụ, ihe dị ezigbo mkpa banyere taya ị na-eji ha.
Ọ dị mkpa na ị na-eji taya na-enweghị tube na rim ndị a dị ka ikike dị elu na stiffer beads nke taya na-enweghị tube pụtara na ha achọghị mkpa ahụ iji mee nko nko iji rụọ ọrụ. Nwere ike iji tube dị n'ime ebe a, mana ị ga-achọ taya ndị a na-agba taya. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe edemede ọzọ maka ịmaba n’ime usoro ogbugba ọhụụ ọhụụ Zipp. n'ihi na ọ bụ nnukwu nkwụsịtụ maka ika ahụ ma ha achọpụtala ihe na-atọ ụtọ ma na-enyekwa ezigbo uru, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịchọtaworị na mgbakọ mgbatị taya ọhụrụ ha, bụ nke algọridim wuru na nyocha ha niile na-adịbeghị anya. .Enwerem obere egwuri egwu.
Echere m na ọ dị mma. Anyị ga-etinye njikọ na nke ahụ na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a. Nke ahụ bụ nkowa dị mkpirikpi nke ọhụụ 303 S.
Ha dị na ụlọ ahịa na-erughị $ 1,300 ma ọ bụ dị n'okpuru £ 1,000 maka ụzọ nke, dịka m kwuru na mbido, na-eme ha ụfọdụ n'ime ọnụ ala carbon dị ọnụ ala karịa nke oge a. Jide n'aka na ị ga-eme ka anyị mata ihe ị chere na ngalaba ndị dị n'okpuru ma biko nye isiokwu a nnukwu isi mkpịsị aka.
Ebee ka wiilị Bontrager carbon dị?
Ego ole ka ụkwụ ụkwụ Bontrager Race dị arọ?
Na 1660 Grams ndị a abụghị ndị 1400-1200 gram clinchers na-amaraBontrager ụkwụ anọkwụba n'ahịrị. Ma anyị agaghị ere ha obere dị ka naanị mmawiilmaka ụbọchị siri ike na ịdịte aka.
Bontrager ọ dị mma Reddit?
Ogweawade ụfọdụukwustof gburugburu, ọ dịghị mkpesa. Ezi akụrụngwa na echiche na-abanye na uwe ma enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla ọkachasị nke m nwere ike ịhọrọ.Ọnwa Ise 6, 2016
Kedu ihe kachasị dị na Trek igwe kwụ otu ebe?
na Fraịdee gosipụtara nke ọhụrụigwe kwụ otu ebe,Mee njemÉmonda SLR 9, otu ụbọchị tupu mmalite nke 104th Tour de France. The Waterloo, Wisconsin, ụlọ ọrụ na-ekwu na ọ bụọkụ kacha mfea na-eme ya manke kachasị mfeụzọ mmepụtaigwe kwụ otu eben'ụwa. Ogwe 56cm Émonda SLR 9 nwere kilogram 640 (kilogram 1.41).June 30. 2017 Nọvemba
Ebuka Trek na-efu ego ahụ?
Trek igwe kwụ otu ebe dị mma Reddit?
Mee njemdị ezigbo mma. Chọta aigwe kwụ otu ebe-amasị gị, na ị na-na na na, na bụ n'ime mmefu ego. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anyaịgba ígwèị nwere ike mgbe niile na-ere gịigwe kwụ otu ebema zuta nke di nma.2 nov. Ọkt 2018
Kedu ụgbọ ịnyịnya okporo ụzọ ụwa kachasị mfe?
na Fraịdee gosipụtara nke ọhụrụigwe kwụ otu ebe, Trek Émonda SLR 9, ụbọchị tupu mmalite nke 104th Tour de France. The Waterloo, Wisconsin, ụlọ ọrụ na-ekwu na ọ bụọkụ kacha mfea na-eme ya manke kachasị mfemmepụtaokporo ụzọn'imeụwa. Ogwe 56cm Émonda SLR 9 nwere kilogram 640 (kilogram 1.41).June 30. 2017 Nọvemba
Kedu ihe bụ igwe kwụ otu ebe na ụwa?
Ọ bụkwa ngụkọta ụlọ dị arọ nke Vial Evo Ultra site na German maestros nke carbon fiber Ax-Lightness, na-eme yanke kachasị mfeụzọ mmepụtaigwe kwụ otu ebe na ụwa.
Kedu nke kacha mma Bontrager igwe kwụ otu ebe?
Light-weight, stable and agile, Bontrager wiil bụ ụzọ e ji n'aka iji meziwanye arụmọrụ gị. Lelee nyocha anyị banyere ndị a na-agba ọsọ ọsọ ma hụ otu nweli nwere ike isi gbanwee egwuregwu ahụ.
Kedu ụdị egwu breeki Bontrager na-eji?
Bontrager gbakwunyere egwu ọhụrụ laser-etched maka akara Aeolus XXX, nke nwekwara nsụgharị miri emi miri emi na 2 (28mm) na 4 (47mm), yana diski-breeki na nhọrọ tubular maka elu rim niile. Mgbe m gbagharịchara wiil ndị ahụ n'ọtụtụ ụbọchị nsogbu na Colorado, enwere m ike ịsị na wiil ndị ahụ na-eji nwayọ edozi maka ụdị miri emi dị egwu.
Kedu ihe na-eme Bontrager line pro 30 wiil dị mma?
Ndị ọrụ injinia Bontrager rụrụ ọrụ ikuku oyibo OCLV ha iji nye wiilị ahụ ogo siri ike na ike ma na-eburu ibu obere. Ọkpụkpụ ụkwụ ọhụụ ahụ kwagara na omimi 27mm rim na-emighị emi iji nye ohere maka nrube isi karị, nke bụ mmelite dị mma site na nhazi ụkwụ ụkwụ gara aga.